Iprofayili Company - Shenzhen Swiny Technology Co., Ltd.
iphepha Aluminmum kunye nembasa
ngeso lenyama aluminium
iimveliso ngentando yakho
steel Umbala stainless
circle steel stainless
coil steel stainless
sheet steel stainless kunye nembasa
iimveliso steel stainless
Shenzhen Swiny Technbology Co., LTD, ise-Industrial Area Guanglongxing, Guangming District New, Shenzhen. Yamkelekile imeko imveliso kunye nokusebenza kakuhle apha, traffic elula njengoko 's ecaleni Guangmingcheng Railway Station kunye Shenzhen engaphandle Ring Expressway.
Shenzhen Swiny Technbology Co., LTD, inkampani yobuchule kunye namava nyaka-12 kwishishini insimbi nje, siya ukugxininisa processing of iintlobo ezahlukeneyo jiko stainless, iziqwengana insimbi, izangqa intsimbi engatyiwa neepleyiti insimbi. Kwakhona Sizimisele ukuba processing kunye norhwebo izinto aluminiyam, kwaye ngexesha nye babambisana kunye nophuhliso iimveliso zentsimbi kunye lemveliso neenkampani ezininzi engatyiwa iminyaka emininzi, ukuqinisekisa ukuba usebenzisa umgangatho eliphezulu izinto ukwenza imveliso egqwesileyo ukuze sibe uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo abathengi.
Phakathi imveliso esisebenza, siya ikakhulu sincoma mirror sentsimbi yethu stainless, umbala intsimbi engatyiwa impandla steel stainless leyo kunabanye inkampani yethu abafundisani technology.
"Quality kuqala, umthengi ebomini, ulawulo ingqibelelo, lonke inkqubela abasebenzi" na intanda wethu ayiguquki. intsebenziswano lwexesha elide kunye iingxilimbela intsimbi Chinese, ezifana Baosteel, TISCO, Baoxin kunye nezinye intsimbi iinkampani izinto ekrwada Kufuneka, ukunika abathengi kunye imveliso egqwesileyo Ixabiso-olusebenzayo. impahla yethu kunye neemveliso uluphumelele certification SGS kunye Ukutya-Grade, ukhuseleko uzinzile yaye ithembekile. Sikholelwa ukuba umgangatho kunye ngengqibelelo uya kusenza ukuba siye kwihlabathi ngokubanzi kunye nabathengi bethu!
Idilesi Factory: Floor B 1Th No.1 Building, Guanglongxing Industrial par ndawo, Baihua ekuhlaleni, Guangming District, Shenzhen.
Tsalela Us Ngoku: (86) 0755-26665358
Ibhokisi sasemini Stainless, Lunch Box Stainless Steel Food, Ibhokisi sasemini Stainless Bento, Metal Lunch Box Stainless Steel, Lunch Box Steel Stainless, Ibhokisi sasemini Stainless,